Perihal Piala Dunia 2018 | MMXV
Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Koobka adduunka 2018 ayaa noqon doona 21-ka Koobka Adduunka ee FIFA, oo ah tartan caalami ah oo kubadda cagta ee tartanka kubada cagta adduunka oo ay ku tartamayaan kooxaha xulalka adduunka ee ururada FIFA. Waxaa la qorsheynayaa in uu ka dhaco Ruushka laga bilaabo 14ka Juun ilaa 15 Luulyo 2018, ka dib markii dalka la siiyay xuquuqda martigelinta 2 December 12, 2010. Tani waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee Koobka Aduunka lagu qabto Yurub ilaa 2006; dhamaantood mid ka mid ah goobaha garoomada waxaa ku yaala Yurub Yurub, galbeed ka mid ah Buuraleyda Ural si loo ilaaliyo waqtiga safarka. Tartanka kama dambaysta ah wuxuu ku lugleeyahay 32 kooxo qaran, oo ay ka mid yihiin 31 kooxood oo lagu go’aamiyay tartamada isreebreebka ah iyo kooxda martigelinta si toos ah u leh. 32 kooxood oo ka mid ah 20ka xul ee ka qeybgalaya Koobka Adduunka ee 2014, ayaa waxaa ka mid ah difaacida horyaalka Jarmalka, iyo Brazil oo ah kooxda kaliya ee ka qeyb gashay tartamada oo dhan, halka Iceland iyo Panama ay labadoodaba Koobka aduunka ee FIFA Wadarta 64 kulan ayaa lagu ciyaari doonaa 12 goobood oo ku yaal 11 magaalo. Finalka wuxuu dhici doonaa 15ka Luulyo ee magaalada Moscow ee Luzhniki Stadium. Guuleystayaasha Koobka Adduunka ayaa u qalmi doona Koobka Confederations Cup ee 2021. Perihal Piala Dunia 2018
Perihal Piala Dunia 2018 Nidaamka tartan ee martigelinta Koobka Adduunka ee 2018 iyo 2022 ayaa bilaabmay Janaayo 2009, ururada qaran waxay lahaayeen ilaa 2 Febraayo 2009 si ay u diiwaan galiyaan danahooda. Ugu horreyntii, sagaal dal ayaa meel dhigay koobkii aduunka ee FIFA 2018, laakiin Mexico ayaa mar kale ka baxday dacwad ah, waxaana dalabkii Indonesia ku diiday FIFA bishii Febraayo 2010 ka dib markii xukuumadda Indonesia ay ku guuldareysatay inay soo gudbiso warqad ay ku taageereyso dalabka. Intii lagu jiray geedi socodka tartanka, seddexda wadan ee aan ahayn UEFA (Australia, Japan, iyo Mareykanka) ayaa si tartiib tartiib ah uga baxday dalabyada 2018-ka, iyadoo dalalka UEFA ay ka go’een dalab 2022 ah. Sidaasi darteed, waxaa ugu dambeyntii ahaa afar dalab oo loogu talagalay Koobka Adduunka ee 2018: England, Russia, Netherlands / Belgium, iyo Portugal / Spain. Guddiga Fulinta ee FIFA oo 2-da xubnood ka kooban ayaa ku kulmay Zurich 2dii December 2010 si ay u codeeyaan si ay u doortaan marti-gelinta labada kooxood. Ruushka wuxuu ku guuleystay inuu noqdo marti-geliyaha 2018-ka wareega labaad ee codeynta. Dalabkii Portugal iyo Spain ayaa kaalinta labaad galay, taasoo ka timid Belgium / Netherlands saddexaad. England ayaa dooneysa inay martigeliso tartankeedii labaad ee koobka adduunka. Perihal Piala Dunia 2018
Previous PostPerihal SejarahQQNext PostPerihal Bayar Per Klik